Bishii Juun 20-22 Kooxda Jizhong waxay ka qeybgaleen VIV Europe 2018 magaalada Utrecht, Netherlands
Intii lagu jiray Noofambar 3, 2017 ilaa Noofambar 8, 2017, kormeerayaasha Gudiga Qaranka ee Daawooyinka & Sunta Sunta (NMPB)
Bishii Juun 20-22 Kooxda Jizhong waxay ka qeybgaleen VIV Europe 2018 magaalada Utrecht, Netherlands. Iyada oo bartilmaameedkeedu yahay 25,000 booqdeyaal iyo 600 shirkado soo bandhigaya, VIV Europe waa munaasabad tayo sare leh oo ka socota wershadaha caafimaadka xoolaha ee adduunka.
Isla mar ahaantaana, xubnaha kale ee kooxdeena ah ayaa ka qeybqaatay CPhI China 2018 magaalada Shanghai, Shiinaha. Waxyaabaha ugu horreeya ee dawooyinka lagu soo saaro waxay muujinayaan Shiinaha iyo guud ahaan Aasiya - gobolka Baasifigga.
Dhacdooyinku waxay na siinayaan fursad wanaagsan oo aan ku soo bandhigi karno alaabaheena, oo ay ku jiraan daawooyinka xoolaha iyo API-yada adduunka, waxaana waqti fiican la qaadanay qoysas badan iyo macaamiil cusub. Iyada oo leh alaabo tayo wanaagsan leh iyo adeegyo xirfadeed, Jizhong Group oo ah astaan ​​caan ah ayaa si weyn u aqbalay booqdayaashu.
Waqtiga boostada: Mar-06-2020